ဝါရှင်တန်ပို့စ် - ဝီကီပီးဒီးယား
ဒီမိုကရေစီသည် အမှောင်ထုထဲတွင် သေဆုံးသည်။
၈၀၀ ဝန်းကျင် (သတင်းသမား)
ဒီဇင်ဘာ ၆၊ ၁၈၇၇; ၁၄၄ နှစ် အကြာက (၁၈၇၇-၁၂-06)
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၊ ဝါရှင်တန်ဒီစီ၊ ၁၃၀၁ ကေလမ်း အန်ဒဘလျူ
ဝါရှင်တန်ပို့စ် (အင်္ဂလိပ်: the Washington Post, the Post)သည် ဝါရှင်တန်ဒီစီတွင် ထုတ်ဝေသော အမေရိကန် နေ့စဉ်သတင်းစာဖြစ်၍ ဝါရှင်တန်မြို့ပြနယ်မြေတွင် စောင်ရေအား အကောင်းဆုံးသတင်းစာဖြစ်သည်။ ထို့နောက် နိုင်ငံတွင်း၌ ဖတ်သူအင်အားသည်လည်း များပြားသည်။ နေ့စဉ် ဆိုက်ကြီးမူကို ဝါရှင်တန်ဒီစီ၊ မယ်ရီလန်း၊ ဗာဂျီးနီးယား ပြည်နယ်တို့အတွက် ရိုက်နှိပ်ထုတ်ဝေသည်။ သတင်းစာသည် ပူလစ်ဇာဆု ၆၉ ကြိမ်အထိ ရရှိထားကာ နယူးယောက်တိုင်းစ်ပြီးလျှင် ဒုတိယအများဆုံးရရှိထားခြင်းဖြစ်၏ ။ ဝါရှင်တန်ပို့စ်မှ သတင်းသမားများသည်လည်း နီးမန်အဖွဲ့ဝင်ဆု (Nieman Fellowship) ၁၈ ကြိမ်၊ အိမ်ဖြူတော် သတင်း ဓာတ်ပုံသမားများအဖွဲ့ဆု ၃၆၈ ကြိမ် ရရှိထားပြီးဖြစ်သည်။ သတင်းစာကို နိုင်ငံရေးသတင်းဖော်ပြထုတ်ပြန်ချက်များကြောင့် လူသိများကြ၍ နိုင်ငံခြားသတင်းအချက်အလက် စုဆောင်းဖြန့်ဝေမှုကို လုပ်ဆောင်နိုင်သော အနည်းငယ်သာကျန်တော့သည့် သတင်းစာများထဲက တစ်ခုလည်းဖြစ်ပေသည်။
၁၈၇၇ တွင် တည်ထောင်ခဲ့ကာ အစောပိုင်းနှစ်ကာလများတွင် ပိုင်ဆိုင်သူအချို့ ပြောင်းလဲမှုများရှိပြီး ငွေရေးကြေးရေး၊ တည်းဖြတ်သူ ပြဿနာများကို ရင်ဆိုင်ရုန်းကန်ခဲ့ရကာ ထို့နောက် ငွေထောက်ပံ့သုံးစွဲနိုင်သူ ယူဂျီးန် မဲယာက သတင်းစာ၏ ၁၉၃၃ တွင် ဒေဝါလီခံရမည့်အခြေအနေမှ ဝယ်ယူခဲ့၍ အသစ်တဖန်ပြန်လည် တိုးတက်အောင်ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ ယင်းနောက် ကတ်သရင်း ဂရေဟမ်၊ ဖိလစ် ဂရေဟမ်တို့က အပြိုင်အဆိုင်ထုတ်ဝေနေသော သတင်းစာများကို ဈေးကွက်စီးနိုင်ရန် ဝယ်ယူခဲ့ကြသည်။
အင်တာနက်ပေါ်ပေါက်လာသောအခါ ဝါရှင်တန်ပို့စ်၏ ပြည်တွင်း၊ နိုင်ငံတကာ ဖြန့်ကျက်နိုင်အားကို တိုးမြှင်နိုင်ခဲ့လေ၏ ။ ၂၀၁၃ အောက်တိုဘာတွင် ဂရေဟမ်မိသားစုက သတင်းစာကို နဲ့ရှ်ဦးပိုင် (Nash Holdings) သို့ အမေရိကန်ဒါ်လာ သန်း ၂၅၀ ဖြင့် ရောင်းချခဲ့ကြသည်။
↑ Somaiya၊ Ravi။ "Publisher of The Washington Post Will Resign"၊ September 2, 2014။
↑ Ember၊ Sydney။ "To Trump, It's the 'Amazon Washington Post.' To Its Editor, That's Baloney."၊ The New York Times၊ April 2, 2018။
↑ Achenbach, Joel (December 10, 2015)။ Hello, new Washington Post, home to tiny offices but big new ambitions။
↑ Masnick၊ Mike (October 17, 2018)။ PEN America Sues Donald Trump For 1st Amendment Violations In Attacking The Press။
↑ Michaela Riva Gaaserud (February 11, 2014)။ Moon Virginia & Maryland: Including Washington DC။ Avalon Publishing။ pp. 556–။ ISBN 978-1-61238-517-4။
↑ District of Columbia's Top 10 Newspapers by Circulation (October 16, 2015)။
↑ Washington Post။
↑ Media companies with the most Pulitzer awards in the U.S. 2018 (in en)။
↑ The Washington Post | Roper Center for Public Opinion Research။
↑ Jobs at (in en)။
↑ "Washington Post Sale: Details of Bezos Deal"၊ August 5, 2013။ "Notably, Bezos — throughanew holding company called Nash Holdings LLC— will be buying only the Post newspaper and closely held related ventures."
↑ "The Real Reason Jeff Bezos Bought The Washington Post" (in en-US)၊ Fast Company၊ August 6, 2013။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ဝါရှင်တန်ပို့စ်&oldid=672473" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၂၀ ဩဂုတ် ၂၀၂၁၊ ၁၁:၅၀ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။